‘समृद्ध पर्वत’ हाम्रो एकमात्र चाहाना : अध्यक्ष पुरन गिरी
अन्तराष्ट्रिय पर्वत समाजको दोस्रो अधिवेशन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । पैयु गाउँपालिका हुवासमा सम्पन्न अधिवेशनले अध्यक्षमा पुन : पुरन गिरीलाई सर्वसम्मत चयन गरेको छ । संस्थाले पर्वत जिल्लाको समृद्धिका लागि काम गदै आएको छ । समाजले विशेष गरि शिक्षा, स्वास्थ्य जोड दिँदै आएको छ । साथै जिल्लामा घट्ने भैपरि समस्यामा पनि सहयोग गदै आएको छ । नवनिवार्चित कार्य समिति आएपछि समाजले भावी दिनमा कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा पर्वत नेपाल अनलाईनका पत्रकार साजन परियारले अन्तराष्ट्रिय पर्वत समाजका अध्यक्ष पुरन गिरी सँग गर्नुभएको समसामयिक कुराकानी ।
दोस्रो अधिवेशनवाट पुन : अध्यक्षमा चयन हुँदा कस्तो महशुस गर्नुभएको छ ?
दोस्रो कार्यकालमा फेरि सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्षमा चयन भएकोमा आफुमा अझै जिम्मेवारी थपिएको महसुस गरिरहेको छु । संस्थालाई अझै उचाईमा पु¥याउन, समाजसेवामा अझै प्रतिबद्ध भएर लाग्न, संसारभरिका साथीहरुलाई सहकार्यमा जोड्न अझै जिम्मेवारीका साथ लाग्ने दायित्वको भारी बोेकेको महसुस गरेको छु । अघिल्लो कार्याकालमा असल काम गरेकै कारण होला साथीभाईहरुले फेरि मलाई चुन्नुभएको छ । यस अवसरमा मलाई अध्यक्षमा फेरि चुन्नुहुने सबै साथीहरुलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि यहाँहरुको रचनात्मक सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
अन्तराष्ट्रिय पर्वत समाजको अवको लक्ष्य के के हुन्छ ।
हामी स्थापना हुँदाको बखत नै स्पष्ट रुपमा एउटा खाका बनाएर स्थापना गरेका हौँ । हामी त्यहि खाका र धारणा अनुसार अगाडी बढ्छौँ । यो एउटा बिशुद्ध सामाजिक संस्था हो । गैह्र आवासीय पर्वतेलीहरुलाई समेटेर जिल्लाको विकासमा जुटाउने हाम्रो प्रयास हो । विगतमा हामीले योजना अनुसार गर्न नसकेका काममा आगामी दिनमा पुरा गर्ने हाम्रो लक्ष्य हुनेछ । पर्वतमा सामाजिक रुपमा अरु धेरै काम गर्न बाँकि छन् । के कसरी अगाडी बढ्ने भनेर अव साथीहरु संग बसेर छलफल गरेपछि भावी योजनाको बारेमा कार्ययोजना बनाउने हाम्रो सल्लाह छ ।
पर्वत जिल्लाले तपाईहरुको योगदानलाई कसरी हेरेको महसुस गरिरहनुभएको छ ।
एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । मैले पनि यो कुरा हरेक पल्ट सोच्ने विषय हो । पर्वतलाई हामीले धेरै केहि गर्न सकेका त छैनौँ । तर, जे गरेका छौँ त्यसले सायद जिल्लावासीहरुले निस्वार्थ हामीले सेवा गरेको बुझेका छन् भन्ने लाग्छ । वास्तवमा पर्वतबाट हामीले केहि फाईदा लिने भन्दा पनि पर्वतका लागि केहि दिने संकल्प गरेर काम गरेको हुनाले हाम्रो योगदानलाई पर्वतले सकारात्मक रुपमा हेरेको महसुस गरेको छु ।
संस्थाले बिदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागी के के योगदान पु¥याईरहेको छ ।
जिल्लाको विकास र पवद्र्धनमा टेवा पु¥याउन सम्बृद्ध पर्वत अभियानमा पर्वत जिल्ला घर भै हाल विश्वको कुनै पनि देशमा बसोवास गर्ने नेपालीहरुले जिल्लामा स्वास्थ्य शिक्षा र परोपकारी कार्यमा समस्याहरुसँग सम्झौता गदै कला, संस्कृती, इतिहास र विविध क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी जीवन्त राख्नुका साथै जगेर्ना गर्न, अनुभव तथा योग्यताको कदर गरी इमानदारिता र व्यक्तित्वको विकास गर्न, आधुनिक तथा वैज्ञानिक शिक्षाको अध्ययन गरी अतिरिक्त व्यत्तित्व विकासको विकास गर्न, आधुनिक तथा वैज्ञानिक शिक्षाको अध्ययन गरी अतिरिक्त व्यक्तित्व विकासमा प्रोत्साहनमा टेवा पु¥याउँदै लैजाने एंव आफुमा रहेको प्रतिभाको विकास गर्न विश्वमा रहेका पर्वतेहरुलाई परेका समस्याहरुको पहिचान गरी सहयोग गर्ने अभिप्रायले कुनै पनि राजनैतिक वा व्यापारिक लाभ नलिई सामजिक सेवा गर्न उद्देश्यले विदेशमा रहेका पर्वते मात्र नभई समस्त नेपालीहरुको पक्षमा यस संस्थाले योगदान पु¥याईरहेको छ ।
संस्था गठन भएदेखी यहाँहरुले के के काम गर्नुभयो ।
समुन्नत पर्वत निर्माणमा पबित्र उद्देश्यले यस संस्थाको स्थापना भएको हो । सम्बृद्ध पर्वत निर्माणमा हाम्रो अभियान भन्ने संस्थाको मुल नारा छ । यहि नारालाई आत्मसाथ गदै हामी अगडी बढेका छौँ । लामो समयदेखी हामीले पर्वत जिल्लाको समृद्धिका लागि धेरै काम गरेका छौँ । अहिले पनि हामी पर्वत जिल्लाको समृद्धिका लागि गृहकार्यमा जुटिराखेका छौँ । जस्तै हामीले दशै अगडी जलजला–८ नाग्लिवाङ लस्तीका पहिरो पीडितका निमित्त आवास निर्माण गरि हस्तान्तरण गरौँ । त्यस्तै फलेवास नगरपालिका, जलजला र पैयु गाउँपालिकामा बर्थिङ सेन्टर निर्माण गर्ने तयारीमा जुटेका छौँ । यति मात्र होईन हामीले पर्वत जिल्लामा आउने भैपरि समस्या सँगै दुःखमा परेका पर्वतहरुलाई सहयोग गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।
जनप्रतिनिधी सँग यहाँहरुको कत्तिको समन्वय हुन्छ ?
तपाईले अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो । हाम्रो देशनै स्थानीय तहमय भएको छ । त्यसैले हाम्रा हरेक क्रियाकलपा र गतिविधी स्थानीय तहमै हुन्छन् । त्यसमा कुनै दुविधा छैन । हामीले स्थानीय तह सँग संवाद र सहकार्य गरिरहेका छौँ । जनप्रतिनिधको समन्वय हामीले धेरै कार्यक्रम गरेका छौ । हामी प्रवासमा भएपनि कार्यक्रम त पर्वतका स्थानीय तहमा नै गर्ने हो । अहिलेसम्म हामीले जनप्रतिनिधी सँग समन्वय गरेर काम गरेका छौँ । आगमी दिनमा पनि जनप्रतिनिधी सँगै समन्वय गरेर अगडी बढ्छौँ । यसमा कुनै दुविधा छैन ।
जिल्लाको समृद्धिका लागि प्रवासीको कस्तो भूमिका हुन्छ ?
प्रवासवाटै हामीले समृद्ध जिल्लाको परिकल्पना गरिरहेका छौँ । संसारको जुनसुकै कुनामा रहेर पनि आफ्नो देश र जिल्लाप्रतिको कर्तव्यलाई कुनै पनि प्रवासीले नर्कन सक्दैन । पछिल्लो समयमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्समार्फत प्रवासी नेपालीले महत्वपूर्ण योगदान छ । प्रवासमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपालीको समृद्धि मुलुकसँग जोडिने हुँदा विभिन्न किसिमका सीप, व्यवसाय तथा शिक्षामार्फत नेपालले आफूलाई समृद्ध पार्न सक्छ । कुनै पनि मुलुकको विकासमा योगदान पु¥याउनका लागि पहिले आफू पनि बलियो र समृद्ध हुनु पर्दछ । अहिले झन्डै ६० र ७० लाखको हाराहारिमा विदेशिएका नेपालीले आफ्नो कमाईको केही अंश आफ्नो परिवार, गाउँ र समाजसँग जोड्ने हो भने देश विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने कुरामा दुई मत छैन । प्रवासमा रहेर समृद्ध बनेका नेपालीले मुलुकको सम्बर्द्धन र प्रबर्द्धनको लागि आफ्नो योग्यता, शिक्षा र व्यवसायलाई लगानीको रुपमा मुलुकमा प्रवेश गराउनु पर्छ । सरकारले पनि प्रवासी नेपालीलाई लक्षित गरी विभिन्न परियोजनाहरुमा लगानीको आह्वान गर्नुपर्छ । मुलुकमा भएका ठूला जलविद्युत परियोजनाहरुमा प्रवासी नेपालीमार्फत लगानी बढाउनुपर्ने र लगानी सुरक्षित गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले अग्रसरता देखाउनु पर्छ ।
सर्वप्रथम मलाई आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिएकोमा पर्वत नेपाल अनलाईनलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छु । अन्तराष्ट्रिय पर्वत समाजको दोस्रो महाधिवेशनवाट गरिमामय अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गराउनु भएकोमा समाजका प्रमुख संरक्षक, सल्लाहकार, प्रतिनिधी, शुभेच्छुक तथा सहयोगीप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । दोस्रो महाधिवेशनवाट निर्वाचित सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई बधाई दिन चाहान्छु । महाधिवेशनलाई सम्पन्न गराउन लाग्नुहुने निवर्तमान कार्यसमिति, निर्वाचन समिति, जनप्रतिनिधी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार लगायत शुभचिन्तक ज्यूलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । अन्तराष्ट्रिय पर्वत समाज सामजिक संस्था हो । यस संस्थावाट हामीले कुनै लाभ लिनु छैन । हामीले प्रवासमा पसिना बगाएर कमाएको एक–एक रुपैयाँ जम्मा गरेर आफ्नो जन्मभूमि प्रति केही गरौँ भनेर लागेको हो । सम्बृद्ध पर्वत निर्माणमा हाम्रो अभियानलाई साथ दिन सम्पूर्ण पर्वतवासीलाई अनुरोध गर्दछु , धन्यवाद । जय पर्वत ।
व्यक्तिगत भन्दा सामुहिक मुद्धामा बढि केन्द्रित छौँ : झलक केसी (बरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्तराष्ट्रीय पर्बत समाज) 435
‘समृद्ध पर्वत’ हाम्रो एकमात्र चाहाना : अध्यक्ष पुरन गिरी 397
पञ्चासे केवुलकार देशकै समृद्धिको आधार 762
जन्मभुमि प्रतिको कर्तव्यलाई कसैले नभुलौँ : नरवहादुर रोका 1359
पर्वतको बिकासका लागि यूएईको भेला अवसर : भुर्तेल 1212
‘सालको पातको टपरी’ बोलको गित सुपर हिट हुनुका कारण कुलेन्द्रले खोले 826
जीन्दगीनै समाजसेवाका लागि सुम्पेको छु । 828
हामी पर्वतको विकासमा हातेमालो गर्ने अभियानमा छौँ । 868
अमेरिकामा रहेका पर्बतेलीलाइ एकजुट गर्न लागिरहेका छौ 3282